Safaaradda Mareykanka ee Somalia ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay ku lug yeeshaan… – Hagaag.com
Safaaradda Mareykanka ee Somalia ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay ku lug yeeshaan…
Safaaradda Mareykanka ee Magaalada Muqdisho ayaa goor dambe oo xalay ahayd soo saartay qoraal muwaadiniinta Mareykanka looga digayo inay ku lug yeeshaan bannaanbaxaasi, marka la eego baa qoraalka lagu yiri halista dembiyada rabshadaha wata.
“Bannaanbaxyada ayaa la fillayaa inay dhacaan Jimcaha, 19-ka February 2021, saacaddu markay tahay 8:00 subaxnimo illaa 2:00 duhurnimo, taalada Daljirka Dahsoon ee Magaalada Muqdisho. Musharixiinta mucaaradka ee u taagan xilka Madaxweynaha ayaa ku baaqay mudaaharaad looga soo horjeedo Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo dib u dhaca ku yimid hawlaha doorashooyinka dalka. Marka la eego halista dembiyada rabshadaha wata iyo kacdoonka shacabka, muwaadiniinta Mareykanka waa inay ka foggaadaan bannaanbaxyadan iyo wax kastoo la xiriira bannaanbaxa.” Ayaa lagu yiri qoraalka.